လက်ကား APET/PET သာမိုပုံစံစာရွက် extrusion line ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူ | ချန်ပီယံ
အခမဲ့ crystallizer twin screw extruder နှင့် single screw co-extrusion
APET၊ ရောစပ် PET ပစ္စည်း
အလွှာတစ်လွှာ၊ ၂လွှာ သို့မဟုတ် ၃လွှာစာရွက်
အခမဲ့ crystallizer နှင့် dehumidifier၊ မြင့်မားသောထွက်ရှိနိုင်စွမ်း၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ SIEMENS လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် PLC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလိုအလျောက် ပလပ်စတစ် PET စာရွက် ထုတ်ယူသည့်စက်။
လွတ်လပ်သော R & D extruder၊ ဝက်အူစည်နှင့်ဝက်အူဒြပ်စင်များပါရှိသည်။ ဝက်အူဒြပ်စင်များကို မတူညီသော ပစ္စည်းအခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ APET၊ PETG၊ RPET၊ CPET၊ မတူညီသော PET ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောစပ်ထားသော PET ပစ္စည်းကိုပင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အထူးနို့တိုက်သည့်ယူနစ်သည် ပုလင်းအမှုန်အမွှားများကို 100% ဖြစ်နိုင်ပြီး အထွက်နှုန်းကို သေချာစေသည်။
အားကောင်းသော ဖုန်စုပ်စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး သဘာဝ အိတ်ဇောဇုန်နှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင်သည်။ extruder အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ၏ အစိုဓာတ်ကို ကုန်ဆုံးစေရုံသာမက ပစ္စည်း၏ အညစ်အကြေးများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်စာရွက်၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ တုန်ခါမှုမရှိ၊ အစက်အပြောက်မရှိပါ။ ခံနိုင်အားကောင်းမွန်ပြီး နက်နဲသောခွက်ကိုပင် အပူချိန်ထိန်းပေးသည်။
ဆီလီကွန် coating ယူနစ် သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အပေါ်ယံအလွှာစက်ကို အစားအသောက်စာရွက်နှင့် လျှပ်စစ်စာရွက်အတွက် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော roller၊ မှန်မျက်နှာပြင်၊ ချောမွေ့သောစာရွက်မျက်နှာပြင်သေချာပါစေ။
အရွယ်အစားကြီးသော ရေပြွန်သည် ရေကို ဘယ်မှညာသို့ ပိုမြန်စေသည်။ roller ၏အအေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာစေရန်။
SIEMENS servo motor နှင့် SIEMENS servo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ တည်ငြိမ်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
"အရှိန်မြှင့်ရန်သော့ချက်" ၏ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်သည် နိမ့်သောအမြန်နှုန်း ချိန်ညှိမှု၊ အတက်အကျမရှိဘဲ မြန်နှုန်းမြင့်ထုတ်လုပ်မှုကို သဘောပေါက်နိုင်ပြီး စက်ချိန်ညှိနေစဉ်အတွင်း ကုန်ကြမ်းများကို ဖြုန်းတီးမှုများစွာ လျော့နည်းစေသည်။
အကွေ့အကောက်စနစ် နှစ်မျိုးရှိသည်၊ တစ်မျိုးမှာ အများအားဖြင့် manual work winder ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ ပြီးပြည့်စုံသော အလိုအလျောက် အကွေ့အကောက်စနစ်ဖြစ်သည်။
SIEMENS servo motor တပ်ဆင်ထားသော winder ။
အလိုအလျောက်အကွေ့အကောက်စနစ်၊ အလိုအလျောက်စာရွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အော်တိုစာရွက်တင်ခြင်း။ တူညီသော လေဝင်ရိုးဖြင့် ကွေ့ပတ်နေသော လိပ်နှစ်ချောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
3 လက်မနှင့်6လက်မ လေဝင်ရိုးကို တူညီသော အလိုအလျောက် လေဝင်ပေါက်ဖြင့် အသုံးပြု၍ ဖြတ်တောက်ထားသော ဓားများကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အစားအသောက်ပုံး၊ သစ်သီးထုပ်ပိုးခြင်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးခြင်း၊ မျိုးစေ့ဗန်းများ၊ မျက်နှာအကာအရံများ၊ ပရိဘောဂများနှင့် အခြားအပူပေးသည့်ပစ္စည်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ အမိုးအကာများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်နဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်စာရွက်ကို စက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ထုတ်လုပ်လို့မရပါဘူး။
ဉာဏ်ရည်၊ ရိုးရှင်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်။ SIEMENS ကြိမ်နှုန်း၊ SIEMENS servo ပါရှိသော SIEMENS S7-1500 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးပါ။ Profinet ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် ထိန်းချုပ်မှု။
100M/s မြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ရက် ထုတ်လွှင့်မှု။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှု၊ လက်ရှိ၊ ဖိအား၊ အမြန်နှုန်း၊ အပူချိန် အစရှိသည့် စခရင်တစ်ခုတွင် အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို ကြည့်ရှုပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောစာရွက်ပြုလုပ်စက်အတွက် HMI မျက်နှာပြင်တစ်ခုသာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
1. မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ နောက်ဆုံးစာရွက်ထုတ်ကုန်၏ အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဥပမာ၊ အကျယ်၊ အထူ၊ စွမ်းရည်၊ အသေးစိတ်အသုံးချပလီကေးရှင်းနှင့် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအခြေအနေတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။
2. PET sheet extrusion line အတွက် ပစ္စည်းကို အခြောက်ခံရန် လိုအပ်ပါသလား။
ပုံမှန်အားဖြင့် အခြောက်ခံရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကို ပိုမိုအသုံးပြုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရိုးရိုးအခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုပါ။
3. ဤ PET စာရွက်ထုတ်စက်ဖြင့် အရောင်စာရွက်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
ရောင်စုံ စာရွက်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ သို့သော် extruder စက်တစ်ခုသည် အရောင်တစ်ရွက်တည်းကိုသာ ပြုလုပ်သည်၊ နှစ်ထပ် extruder များသည် နှစ်ရောင်စာရွက်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ယခင်- APET/PETG ခေါက်/ပုံနှိပ်စာရွက် extrusion line